ကိုဗစ်လူနာတွေ သတိကြီးကြီးထားရမယ့် အသံတိတ်ဇီဝိန်ခြွေ ကိုဗစ်လက္ခဏာတခု – Amara News
ကိုဗစ်လူနာတွေ သတိကြီးကြီးထားရမယ့် အသံတိတ်ဇီဝိန်ခြွေ ကိုဗစ်လက္ခဏာတခု
Honeymoon Hypoxia တဲ့ ။
ပြောရရင် အောက်ဆီဂျင်အရမ်းကျနေတာ (hypoxia) ကို monitor မှာ ပြနေတယ် ။ သို့ပေသိ လူနာမှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုမှမပြဘူး (ဥပမာ – မောတာ) ။ ဆိုတော့ကာ လူနာက ဘာလက္ခဏာမှမခံစားရဘူး (ဒါဟာ ကိုဗစ်ကြောင့်ပါ) ။ မခံစားရတော့ နေသာသလိုနေတယ် ။ ပြောစကား နားမထောင်ဘူး ။
ဦးလေးရေ / အဒေါ်ရေ . . . ဒီမှာတော့ အောက်ဆီဂျင်ကျနေပါတယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး မှောက်ရက်နေပေးပါ ။ နည်းနည်းလေးမှ မလှုပ်ပါနဲ့ ။ အိမ်မြန်မြန်ပြန်ချင်ရင်
အောက်ဆီဂျင်ကို အားစိုက်ရှုပေးပါ ။ တစ်ခုခုလုပ်ချင်ရင် အထဲမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေ ၊ ဆရာမတွေ ၊ ဗိုလံတီယာတွေကိုပြောပါ ။ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး
အောက်ဆီဂျင်ကိုသာ အားစိုက်ပြီးရှုပေးပါ ။
အာပေါက်မတတ်ပြောတယ် ။ လိပ်ခေါင်းထွက်မတတ်ပြောတယ် ။ သို့ပေသိ honeymoon hypoxia – happy hypoxia လို့ခေါ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်တဲ့ လက္ခဏာကို
လူနာကမခံစားရတော့ ဟောရင်းသာ ပျံလွန်တော်မူသွားမယ် . . . လူနာတွေက စကားနားမထောင် ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အောက်ဆီဂျင်အကူအညီမပါပဲ အိမ်သာထသွားတော့
လူနာက အိမ်သာသွားတဲ့လမ်းမှာတင် ကိစ္စပြတ်သွားတယ် ။
အပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့ လူကပင်ပန်းတဲ့ပုံမပေါ်ပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ တော်တော်များများက ထိခိုက်နေကြပါပြီ ။ ခုဆိုရင် လက်သန်းမှာ မှင်စွန်းရာလေးတွေနဲ့
ပေါ့စတစ် လူနာတွေလည်း တွေ့လာနေရပါပြီ ။ ဗိုလံတီယာတွေ ၊ ဆရာ / ဆရာမတွေ တော်တော်များများလည်း သိပ်ပြီးတောင့်ခံနိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး ။ မြန်မြန်ပြီးစေချင်ပါပြီ ။
Tay Zar Maung Maung
ေျပာရရင္ ေအာက္ဆီဂ်င္အရမ္းက်ေနတာ (hypoxia) ကို monitor မွာ ျပေနတယ္ ။ သို႔ေပသိ လူနာမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လတ္တဲ့လကၡဏာတစ္ခုမွမျပဘူး (ဥပမာ – ေမာတာ) ။ ဆိုေတာ့ကာ လူနာက ဘာလကၡဏာမွမခံစားရဘူး (ဒါဟာ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ပါ) ။ မခံစားရေတာ့ ေနသာသလိုေနတယ္ ။ ေျပာစကား နားမေထာင္ဘူး ။
ဦးေလးေရ / အေဒၚေရ . . . ဒီမွာေတာ့ ေအာက္ဆီဂ်င္က်ေနပါတယ္ ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေမွာက္ရက္ေနေပးပါ ။ နည္းနည္းေလးမွ မလႈပ္ပါနဲ႔ ။ အိမ္ျမန္ျမန္ျပန္ခ်င္ရင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို
အားစိုက္ရႈေပးပါ ။ တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္ရင္ အထဲမွာရွိတဲ့ ဆရာေတြ ၊ ဆရာမေတြ ၊ ဗိုလံတီယာေတြကိုေျပာပါ ။ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္ ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုသာ အားစိုက္ၿပီးရႈေပးပါ ။
အာေပါက္မတတ္ေျပာတယ္ ။ လိပ္ေခါင္းထြက္မတတ္ေျပာတယ္ ။ သို႔ေပသိ honeymoon hypoxia – happy hypoxia လို႔ေခၚတဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္တဲ့ လကၡဏာကို
လူနာကမခံစားရေတာ့ ေဟာရင္းသာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားမယ္ . . . လူနာေတြက စကားနားမေထာင္ ။ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ေအာက္ဆီဂ်င္အကူအညီမပါပဲ အိမ္သာထသြားေတာ့ လူနာက
အိမ္သာသြားတဲ့လမ္းမွာတင္ ကိစၥျပတ္သြားတယ္ ။
စိတ္ဓာတ္ေတြက က်ၿပီးရင္းက်ပဲ ။
အျပင္ပန္းကၾကည့္ရင္ေတာ့ လူကပင္ပန္းတဲ့ပုံမေပၚေပမယ့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထိခိုက္ေနၾကပါၿပီ ။ ခုဆိုရင္ လက္သန္းမွာ မွင္စြန္းရာေလးေတြနဲ႔ ေပါ့စတစ္ လူနာေတြလည္း ေတြ႕လာေနရပါၿပီ ။ ဗိုလံတီယာေတြ ၊ ဆရာ / ဆရာမေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိပ္ၿပီးေတာင့္ခံႏိုင္ေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး ။ ျမန္ျမန္ၿပီးေစခ်င္ပါၿပီ ။
Previous Article ေဘာက္ေပ်ာက္ေစ တဲ့ ကိုယ္ေတြ႕နည္း လမ္း…..
Next Article သာမည ဆရာတော်ကြီး၏ အမှုအခင်းရှိလျှင်၊ ပစ္စည်းပျောက်လျှင် ၊နေထိုင်မကောင်းလျှင်၊ ချမ်းသာချင်လျှင်၊ စစ်တိုက်သွားလျှင် ရွတ်ဆိုပူဇော်ရမည့် ဂါထာ